UMvikeli womphakathi kolukaShembe - Isolezwe
June 15 2012 at 02:37pm Comment on this story
SIMPHIWE NDWANDWE IYAQONGA ingcindezi yokuba kuthathelwe izinyathelo iNkosi yaseMaqadini eMzinyathi ngokugxambukela ezindabeni zebandla iNazareth Baptist Church kwaShembe eBuhleni, okwaholela ekutheni kube khona izinhlangothi ezimbili ezibanga ukuhola leli bandla ezizinze khona eBuhleni naseThembezinhle. Encwadini ebhalwe nguMvikeli woMphakathi, u-Adv Thuli Madonsela, eqondiswe kuNgqongqoshe woMnyango wokuBusa ngokuBambisana neziNdaba zabaHoli boMdabu, uNksz Nomusa Dube, ebhalwe ngoMeyi 29 kuthiwa akacacise ukuthi kungani ezithela ngabandayo ekuthatheni izinyathelo kulandela isikhalo sokuthi iNkosi uMqoqi Ngcobo (osesithombeni) wasebenzisa amandla akhe obukhosi ngokungafanele. UMnuz Lennox Mabaso, woMnyango wezabaHoli boMdabu, uthe bebengakayitholi le ncwadi kodwa bayamhlonipha uMvikeli woMphakathi ngakho bazimisele ngokuthi bagcine lolu daba luphakathi kwabo bobabili kuphela. Le ncwadi inqumela uNksz Dube ugwayi katiki imtshela ukuthi ngoJuni 21 kufanele noma kanjani abe semahhovisi oMvikeli woMphakathi eThekwini ukuze aphekwe ngemibuzo ngokuthi kungani kuze kube manje engakaze azihluphe ngokuthatha isinyathelo ngesikhalo esafakwa ngabaseThe-mbezinhle kuye ngokuziphatha kukaNgcobo nyakenye. AbaseThembezinhle bafaka isikhalo kuMvikeli woMphakathi ngoMeyi nyakenye bemsola ngoku-sebenzisa amandla akhe obukhosi budedengu eziqokela umholi wakhe amthandayo ngoba kwaku-ngcwatshelwa endaweni yakhe. Okhulumela abaseThembezinhle, uMnuz Nkululeko Mthetho, uthe ibandla lijabule kakhulu ukuthi u-Adv Madonsela ulusukumele udaba lwabo. Uthe phambilini uMnyango wabachitha ngelokuthi uNgcobo ukhulume njengelungu lebandla ngakho lolu daba kufanele lusingathwe ngaphakathi ebandleni. Uthe kube khona ukuxhumana okuningi phakathi kwabo noMnyango kuphikiswana ngelokuthi iNkosi uNgcobo yakhetha inkosi, ijutshwe ngubani ukuthi yenze leso simemezelo. “Ngesikhathi kungcwatshwa uThingo uNgcobo waze wathi mina njengeNkosi yamaQadi ngithi umholi wenu ‘ngusibanibani’. Lokhu kusho ukuthi wayekhuluma egameni lakhe njengenkosi,” kusho uMthethwa. Ukhale ngokuthi kuningi ukucasha ngesithupha okulokhu kuqhubeka ngasohlangothini lomnyango. “Thina siyibandla sithi ungqongqoshe akasebenzise umthetho wamakhosi uma uNgcobo enecala, angalindi inkantolo ukuthi imthathele isinqumo. Sibona ukuthi uNgqongqoshe usibukela phansi siyibandla ngoba uyakubalekela ukusebenzisa umthetho owengame-le amakhosi. Uma uNksz Dube ebona ukuthi uNgcobo akanalo icala kufanele achaze ukuthi ukusho ngani,” kusho uMthethwa. Imizamo yokuthola okhulumela abaseBuhleni ayiphumelelanga. Comment Guidelines
Weseka uNyazi owaqembuka eBuhleni Usinde edunwa imoto oweChiefs Sebephucwa okokungcwaba emathuneni IChiefs ingase ilahlekelwe ngunozinti ... UZikalala usephakwe esiShayamthetho Property
IOL / Isolezwe / UMvikeli womphakathi kolukaShembe We like to make your life easier